Odayaasha Jubbooyinka oo xukuumadda ka codsaday Taageero iyo Xukuumadda Somalia oo dhagaha ka fureysatay – idalenews.com
Odayaasha Jubbooyinka oo xukuumadda ka codsaday Taageero iyo Xukuumadda Somalia oo dhagaha ka fureysatay
Xilli Shir uu ka socdo Magaaladda Kismaayo ayaa waxaa qaar ka tirsan Odayaasha ka qeybgalay Shirka Maamul u sameynta Jubbooyinka ay Xukuumadda Somalia ugu baaqen inay taageeran Shirka ka socda Magaaladda Kismaayo
Gudoomiyaha Shir Gudoonka Odayaasha Maamulaya shirka maamul u samaynta Juboland Suldaan Cabdicasiis Cumar uu Xukuumadda Somlaia ugu baaqay inay garab istaagto Maamulka ku meelgaarka Kismaayo, waxa uuna sheegay in Xukuumadda Somalia ay ka gaabineyso Hawlaheeda ku aadan Kismaayo.
Suldaanka ayaa sidoo kale sheegay in Xukuumadda Somalia ay ka dhabeysay Go’aankeedii ahaa in Shirka Kismaayo aysan ka qeybqaadaneynin, isaga oona intaa ku daray in xilligaani loo baahan yahay in Xukuumadda ay soo faragaliso Shirka.
Waxa uu intaa ku daray Suldaan Cabdicasiis in hadii ay yihiin odayaasha Jubooyinka iyo Gedo ay ka codsanayaan dowlada federaalka soomaaliya in ay taageerto maamulka ay dhisayaan ,dastuurka cusub ee federaalka uu dhigayo in maamul kasta oo iskiis u samaysan karo maamul, dhanka kale waxaa uu sheegay in ciidamadii isku hor fadhiyay Kismaayo haatan la kala qaaday xaalada magaaladuna ay tahay mid dagan oo aysan wax dhibaato ah ka jirin gudaha Kismaayo.
Haddalka Suldaanka ayaa imaanaya xilli Xukuumadda Somalia ay Shaacisay in Shirka Maamul u sameynta Jubbooyinka uu yahay mid aan lagala tashan Xukuumadda Somalia, waxa uuna sidoo kale ku soo beegmaya Shirkaasi xilli Xukuumadda Somalia ay dhagaha ka fareysatay Codsiyada kaga imaanaya Maamulka iyo Odayaasha dhanka Kismaayo.
Dhawaan ayee ahayd xilligii Ra’isul wasaaraha Somalia Cabdi faarax Shirdoon uu shaaciyay in Xukuumadda Somalia aysan faragishan doonin Shirka isla markaana Xukuumadda Somalia aysan raali ka ahayn qaabka uu shirkaasi u socdo.
Ciidamo ka tirsan dowladda oo isaga soo baxay deegaano ka tirsan Gobolka Baay
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo wefdi uu hogaaminaayo oo Magaalada Riyadh u amba baxay